Sentinel del Norte, nosy mpihinana olona | Vaovao momba ny dia
Rehefa eo am-pelatanantsika ny finday, mifandray be, dia mieritreritra isika fa kely sy moderina izao tontolo izao ary efa amin'ny taonjato XXI isika. Fa ny marina dia mbola malalaka izao tontolo izao ary Mbola misy ny zoro lavitra ny maoderina izay iainan'ny olona ny fomba fiainany taonjato maro lasa izay.
Iray amin'ireo zoro ireo ao amin'ny Isla Sentinel avy any avaratra, nosy kely ao amin'ny Bay of Bengal izay an'ny nosy Andaman. Fantatra amin'ny zoo olombelona izy io, saingy nandritra ny fotoana ela dia fantatra amin'ny anarana hoe ny nosy mpihinana olona...
1 Nosy Sentinel Avaratra
2 Ny Sentinelese
3 Ny Sentinelese, mpihinana olona?
Nosy Sentinel Avaratra
Araka ny nolazaiko Ampahany amin'ny vondronosy ny Andaman, vondrona nosy izay ao amin'ny Bay of Bengal mihodina toerana eo anelanelan'i Myanmar sy India. Ny ankamaroan'ireo nosy ireo dia mandrafitra ny Faritanin'i Andaman sy ny Nosy Nicobar, ao India.
Ny olona monina ao dia tena nanana fifandraisana kely dia kely amin'ny mponina hafa nandritra ny tantarany ary fantatra amin'ny hoe Sentinelese. Foko iray izy io amin'ny ankapobeny mpihaza sy mpanangona ary toy izany dia mivelona amin'ny fihazana, ny jono ary ny zavamaniry eo an-toerana.
Ireo mpihaza sy mpamory fa tsy tantsaha. Tsy mamboly ny tany izy ireo ary inoana fa tsy namolavola fomba fandrehitra afo izy ireo. ka mandinika anthropologists izany miaina amin'ny fanjakana primitive izy ireo.
Tsy vondrona lehibe izy ireo na dia tsy azo lazaina aza ny tarehimarika marina, eo anelanelan'ny 50 sy 500 ny olona. Tsy fantatra ihany koa ny fiantraikan'ny tsunami tamin'ny 2004, ka kely ny fantatra momba azy ireo.
Ny Sentinelese dia avy loko mainty, volo fohy sy afro. Ny zavatra kely fantatra momba azy ireo dia mijanona amin'izay ianarana avy amin'ny olona vitsy nifandray tamin'ny faran'ny taonjato lasa: miaina ao amin'ny trano bongo tsy misy fizara anatiny izy ireo, vita amin'ny ravina palma ny gorodona ary tsy lehibe izy ireo. Mizara iray ny fianakaviana ary misy trano bongo lehibe kokoa hanaovana fivoriana sy fombafomba ara-pivavahana.
Ity vahoaka ity tsy mahalala asa vy satria saika tsy misy metaly eto amin'ny nosy, ka izay kely ananany vy dia toa izay niseho teo amin'ny morony. Ity no tranga iray an'ny mpivarotra mpitatitra entana izay nidona tamin'ny haran-dranomasina teo akaiky teo ary ny zavatra tao anatiny dia nanome vy azy ireo.
Manana laguna telo ilay nosy ka ny Sentinelese dia tsy tokony hanjono any an-dranomasina any ankoatry ny haran-dranomasina miaro azy ireo. Manosika ny valan-tsambon-kavozany amin'ny familiana izay mikasika ny farany izy ireo ary tsy misy zavatra hafa.
Kely ny fifandraisana amin'ireo vahiny ary misy valiny samihafa: tonga tamin'ny faran'ny taonjato faha-XIX ny anglisy ary naka gadra mieritreritra ny hamerina azy ireo amin'ny fanomezana lehibe. Saingy nisy mpivady maty ka namerina zanaka roa, miaraka amin'ny fanomezana eny, izay nanjavona haingana tany anaty ala. Toa tsy dia liana tamin'ny nosy ny anglisy satria tsy niverina intsony.
Tamin'ny taona 60 tamin'ny taonjato faha-XNUMX niverina ny Indiana fa ny Sentinelese niditra tao anaty ala izy ireo ary tsy afaka nifandray tamin'izy ireo izy ireo. Taty aoriana ny Navy Indiana dia niantsona teo akaiky teo ary namela fanomezana vitsivitsy teny amoron-dranomasina. EFA tamin'ny taona 70 dia nanandrana indray ny dia anthropologists, miaraka amin'ny vintana tsara kokoa, saingy tsy nisy zava-dehibe azon'izy ireo.
Ny zavatra mahatsikaiky amin'ity rehetra ity dia izany tamin'ny 1974 dia niverina izy ireo niaraka tamin'ny ekipa National Geographic ary ny Sentinelese dia nivoaka teo amin'ny sampanan-dalana hamely azy ireo amin'ny zana-tsipìka. Raha namela kilalao, kojakojan-dakozia, voanio ary kisoa velona mihitsy aza ny Espaniola tany Amerika. Nanidina indray ny zana-tsipìka ary ny iray naratra ny talen'ny fanadihadiana ...
Tamin'ny taona 90 vao Sentinelese navelany hanakaiky kely ireo sambo fa tsy izany mihitsy. Tamin'ny farany ny governemanta indianina dia nijanona tsy nanandrana nifandray intsonyNoho izany, tsy mazava ihany koa ny fiantraikan'ny tsunami tamin'ny 2004.
Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia fantatra izany novonoin'izy ireo ny mpanjono roa tsy maintsy nandry tao ary nampitahorany ny angidimby tamin'ny vato sy zana-tsipìka. Izay te handre dia mandre, sa tsy izany? Mazava be fa tsy te hahalala na inona na inona amin'ilay antsointsika hoe sivilizasiona ireo olona ireo.
Ho an'ny sasany dia karazana harena izy io, ho an'ny sasany a zoo olombelona. Io dia ny anthropologists izay mino an'izany ny Sentinelese Nipetraka tao amin'ilay nosy nandritra ny 65 taona teo ho eo izy ireoIzany hoe 35 taona talohan'ny vanim-potoanan'ny Ice ary 55 taona talohan'ny nanjavonan'ny mammoth of North America ary 62 arivo talohan'ny nananganana ireo piramida.
Mino fa ireo olona ireo dia avy amin'ny olombelona voalohany nivoaka avy any Afrika ka mahafinaritra. Ny Anthropologists koa dia manana teoria momba ny fitondran-tenany mahery setra sy mihidy: ny nosy dia eo amin'ny làlan'ny làlan-kaleha taloha eo anelanelan'ny Eoropa, ny Afovoany Atsinanana ary Azia atsimo atsinanana, ny làlan'ny andevo, koa mihevitra izy ireo fa noho ny fisehoany Afro dia tsy maintsy nanandrana izy ireo hidina sy hisambotra olona.
Noho izany ny fankahalany sy ny faniriany hijanona tsy ho an'izao tontolo izao. SAINGY avy aiza ny lazan'izy ireo amin'ny maha-kanadianina?
Ny Sentinelese, mpihinana olona?
Ity laza ity dia tsy maintsy niaro azy ireo tamin'ny vahiny liana na tompona andevo. Nisy hatrany ny tsaho manodidina ny faritra fa mpihinana sakafo ny olona ao amin'ny Nosy Andaman. Tsy misy porofo, Angamba ilay hevitra dia avy amin'ny foko sasany mampiasa ny taolan-drazany ho firavaka. Misy karandoha!
Ptolémée, ilay astronoma grika dia niresaka hatramin'ny taonjato faharoa talohan'i JK ny nosy mpihinana olona any amin'ny Bay of Bengal ka ny angano ny mpihinan-kanina dia mivezivezy foana amin'ireo tantsambo. na dia Marco Polo namariparitra ny mponin'ny nosy amin'ny ankapobeny ho 'hazakazak'ireo olon-kendry sy de brutes izay mamono sy mihinana ny vazaha rehetra manitsaka ny taniny".
Somary eto, kely any, olona voaravaka taolan'olombelona sy voila, manana ny angano momba ny mpihinana olona isika. Ary toy ny hoe tsy ampy izany, tsy misy afaka mahalala ireo olona ireo hilaza fa tsy marina izany.
Mety tsy hamakivaky ny ranon'ny Bay of Bengal mihitsy isika ka misy zavatra holazaiko aminao: velomy ny solosainanao, mankanesa any amin'ny Google Earth ary jereo ity faritra eto an-tany ity. Afaka mahita ny sary zanabolana amin'ilay nosy ianao. Tsy dia mampiseho firy izy ireo, marina izany, nosy fotsiny manana ala mikitroka sy ny endrik'ilay mpitatitra entana tafahitsoka tamin'ny taona 80.
Ny Sentinelese dia mbola lavitra ny mason'izao tontolo izao, tontolo iray izay jeren'ny tsirairay ankehitriny ny tsirairay ... afa-tsy ny tenany ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » India » Sentinel Avaratra, nosy mpihinana olona